MOQDISHO MAXAA LAY DAYACAY
Caasimada dalka Soomaaliya ee Moqdisho waxaa ku dhacay ayaan daro aan ku dhicin caasimada aduunka kale. Waxayna noqotay caasimadii ugu ayaanka darnayd abid ee aduunka soo marta inta la ogsoon yahay. Moqdisho waxay leedahay taariikh dheer waxaana soomaray maamulo kala duwan intay soo jirtay. 17 sano oo ay kusoo jirtay dagaalo sokeeye oo ay ku burburtay ayay Moqdisho qadka igula sheekaysatay aniga oo galabdhawayd iska lugaynaya xasuusanaya caruur nimaydii iyo xafadii aan muqdisho uga nolaa. Waxaa hadaladeedii kamidahaa oo aan ka xasuustaa tixdeen hoos ku taal.
caasimad qaran baan ahaa, muqaal iyo bilic baan lahaa, dhir iyo ubax baan lahaa, jidad iyo jardiinooyin baan lahaa, boliis iyo asluub baan lahaa, magac iyo muqaal baan lahaa, tarafiko iyo marishibiyan lahaa, iskuliyo jamacado sare baan lahaa, dalxiis iyo hotelaan lahaa, siyaasi iyo wadani baan lahaa, indhihii qarankaan ahaa, qabiil iyo qurun maan lahayn, ciidan iyo dowlad baan lahaa, xushmad iyo qiimaan lahaa, nabad iyo canan lahaa, indhihii qarankaan ahaa.
dhibaase igu habsaday anigoo macluul meel la aal hugaamiye koxeed ii tashteen, isbaarana igu xardheen dilkiyo dhacuna igu bateen, dadkii ay iga qaxeen, uubato iyo dugaag layga tagay, dadkaygii baduhu qaarbaay laqeen, qaarna qaxootay noqdeen, dadkaygii kala irdhoow, nasiibkaygaa xumaa.
Wadad garlahaa iyimid, oo cadowgii iga dulqaad,dadkaygii qurbahaa salaan iguyimid qarkood 20 sano iga maqnaa, anoo sariirtii kakicin hadana madfacii iga dulyeer, ibtiladani maxay ahayd? anigoo dhawacii ka kicin dadkaygiina nabad heleen aniguna aan faraxsanaa, miyaan nabad layla rabin? Cadowba cadowkaaga daran, midaan diir ii naxayn madaafiic igu harqiyey.
Maciil horuu iqaa? dadkaygii miyey le deen? Ragbaa isoo halgamay xornimo calankii iga suray, miyaad nan wadani lahayn? miyaan damiirkiinu kicin? dad makii horuu ahaa? wadani ma iilkaa la dhigay? Maqax iyo maqaxootay noqdeen? qabiil miyaad calamada usidaan? Qabiil waa kii meshan aal i dhigay curyaan lugihii iga jaray. Soomaalay miyaadnan damiir lahayn miyaad naan cadowgaan arkayn?
Baryuu igu taamayoo lafahayguu rabaa, gumaysi igalshuu rabaa, ikala googooyuu rabaa raqdayda lawaayuu rabaa, dadkayga cunuu rabaa, ADIS igu riduu rabaa, igaaleeyuu rabaa, ibarakiciyuu rabaa, tigree igu beeruu rabaa, aqonyahankayga diloo rabaa, Addis layga maamuluu rabaa, damiir laawe ii adeegsaduu rabaa, in uu iga aarsaduu rabaa, badayda isticmaaluu rabaa.
Dhibkii horaba iga daran soomaalaay adigaa silicaas ibaday adaa cadowga horseed uhaa qarkiinbaa soo galbiyey saadkiyo ubaxyada usiday. Itoobiya miyaa laygu dayn? taariikhda miyaadnan lasocon miyaadnan iskuulada kudhigan? miyaa cadowgaygu saxiibkiina yahay? Abwaan balalaa malahan, fanan hees wadani malahan, guubaabo wadani malan, guroow iyo shirib malahan, alla dad makii horaa makii xornimada keenaybaa. Dadkii miyey wada ledeen?
Wariye warar igama qoro dil iyo xaragbaa sugaa, mid cararay iyo mid aamusay noqdeen dilkii shalay baan kanaxay boog iyo uur xumo igu reeb, labo halyeybaa iga tagay, duco iyo amaantayda bay helen, xaq iyo dad nimay u dhiinteen, runtay sheegeen baa loo daldalay, ilaah caadilbaan ubarin, inay janadii galaan.
Waxaan halkaan uga tac siyeynayaa dhamaan qarabadii iyo ehelkii ay ka jeeriyoodeen Ali Imam sharmake iyo Mahad Ahmed Elmi Waxaana ilaahay uga baryayaa in uu ka waraabsho janadii fardowso. Samir iyo imaana kasiito intee ay ka geeriyoodeen aamin.